Minia mikipy sa tsy te hahalala ? | NewsMada
Minia mikipy sa tsy te hahalala ?
Manahy ny tompon’andraikitry ny Jirama any Fianarantsoa fa hai-trano niniana natao no nahamay ireo birao anankiroa any an-toerana, ny herinandro lasa teo. Voalaza fa efa mandeha izao ny fanadihadiana mikasika izany ka ho hita eo ny fizotrany. Fa raha dinihina ny zava-misy amin’ny ankapobeny, tsy mahagaga mihitsy raha hitombina ny ahiahin’izy ireo. Mandraka ity mantsy ny androany, tsy mitsahatra fa mitohy hatrany ny fitarainana sy ny fimonomononan’ny olona mikasika ny Jirama.
Tsy fahavaratra, tsy lohataona… fa mbola mitohy foana ny fahatapahan-jiro hatraiza hatraiza. Manampy izany koa, tato ho ato, ny fahatapahan’ny rano amin’ny faritra maro. Ny jiro tapaka, ho vita ihany sy efa mahazatra fa ity fahatapahan’ny rano ity no tena raharaha be, miteraka fahasorenana goavana eo amin’ny mpanjifa. Any amin’ny faritra sasany eto an-dRenivohitra sy ny manodidina, any amin’ny misasakalina any vao miverina ny rano. Miverina mba mandeha ihany, saingy zara raha mandeha. Tsy vitan’izay fa ranom-potaka mazava izao no mivoaka ny robinet. Rehefa mitsiaka amin’ny maraina, matevina dia matevina ny fotaka menamena. Famahanana maloto tsotra izao ny mpanjifa no dikan’izany ka tena tsy rariny sy tsy azo ekena.
Mbola mandry saina eo anoloan’izany zava-misy izany ihany ve ny fanjakana, ny minisitera miadidy ity Jirama ity, sy ireo tompon’andraikitra ambony rehetra ? Asa, mbola mandeha tsara tsy misy olana angamba ny jirony, mbola tsy ranom-potaka, toy ny an’ny ankamaroan’ny olona rehetra any amin’ny faritra maro any no ampiasainy… Tsy mahatsiaro fangirifiriana sy olana toy ny valalabemandry rehetra e.
Dia hatramin’ny rahoviana no hiainana izany ? Hiandry ny fipoahan’ny hatezeram-bahoaka, ka mety ho tonga amin’izao zava-nitranga tany Fianarantsoa izao ? Dia hisy hilaza indray izao hoe « fandranitana » ! Sanatria ! Tsy izany velively fa fampieritreretana. Raha tsy hoe angaha efa minia mikipy sy tsy te hahalala mihitsy.